Atọ iji gbanyụọ Ọnọdụ Nchekwa na Windows | Akụkọ akụrụngwa
Esi gbanyụọ njirimara Nchekwa na Windows
Site n'iji obere aghụghọ na ịdabere na ụfọdụ ọrụ na Windows anyị nwere ike iru deactivate ọrụ a na-akpọ «Nchekwa na ọnọdụ» na ụdị sistemụ a.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara anyị ji atụ aro ịme ụdị ọrụ a, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịchọghị ha n'oge ọ bụla, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ma ọ dịkarịa ala ịnwale mara na n'ime eriri afọ sistemụ arụmọrụ a Microsoft nyere ọrụ enwere enwere ike ijikwa ya na ntakịrị aghụghọ iji gbanyụọ nhọrọ ahụ anyị kwuru na mbido.
1 N'ihi na ọ inactivates "Nchekwa na ọnọdụ" na Windows mmalite
2 1. Dezie ndekọ Windows iji gbanyụọ "Ọnọdụ Nchekwa"
3 2. Kwado / Gbanyụọ Safemode
N'ihi na ọ inactivates "Nchekwa na ọnọdụ" na Windows mmalite
Ọ bụrụ n’itinyebeghị Windows XP n’ezie, ị gaghị ama maka ọrụ a na-atọ ụtọ, nke nyeere ọtụtụ mmadụ aka weghachite sistemụ arụmọrụ gị mgbe otu ihe ahụ, akwụsịla ịrụ ọrụ nke ọma.
Iji nwee ike tinye a «Nchekwa na ọnọdụ» na Windows ị ga-amalitegharịa kọmputa na pịa igodo ọrụ «F8» saa bere no na modaboaboa ne ho ano; obere menu dị ka onyogho anyị debere n’elu ga-apụta ozugbo, nke ga - enyere gị aka ịbanye Windows nwere atụmatụ ole na ole nwere nkwarụ. N'okpuru atụmatụ a, mmadụ nwere ike iwepu paswọọdụ iji nweta Windows, onye pere mpe n'ụlọ nwere ike ịbanye "ọnọdụ nchekwa" a iji chọgharịa saịtị ndị amachibidoro na weebụ ma ọ bụ ikekwe, onye nwere obi ọjọọ ga-anwa iwepụ ngwa ndị dị mkpa ị na mbụ arụnyere na Windows. N'ezie enwere ọtụtụ ihe nwere ike ibilite ma ọ bụrụ na mmadụ ole na ole ndị ọzọ nwere ike ịnweta kọmpụta ọrụ anyị.
1. Dezie ndekọ Windows iji gbanyụọ "Ọnọdụ Nchekwa"
Uzo mbu nke anyi ga ekwu banyere ya dabere na "Windows Registry", nwegharia igodo ole na ole ga enyere anyi aka inweta ebumnuche a. Ga-ebu ụzọ gbalịa ime a ndabere a "Windows ndekọ" ọ bụrụ na ị gbanwee nhọrọ ọ bụla n'ụzọ ziri ezi.
Na-amalite sistemụ arụmọrụ Windows gị mgbe niile (XP ma ọ bụ 7)
Ugbu a ị na-eji ụzọ mkpirisi keyboard: Nweta + R
N'ime oghere dee: regedit
Ugbu a ịnyagharịa na-eso ụzọ na «Windows ndekọ»
Ozugbo ị ga-ahụ igodo abụọ, nke nwere aha "Obere" na "Netwọk"; Kwesighi ihichapụ ha mana anyị na-akwado ka ị gbanwee aha ha ka e wee mebie aghụghọ ahụ n'oge ahụ. Aha ndị ị nwere ike iji bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ma ọ bụrụhaala na ị na-echeta ha. Ezi echiche ga-abụ itinye leta "x" na njedebe nke aha ndị a ọ bụla.
Ugbu a, ị ga-eme Malitegharịa ekwentị Windows ma pịa igodo «F8» iji bulie menu nri; ma ọ bụrụ na site n'ebe ahụ ị na-eme nhọrọ maka banye «Nchekwa na ọnọdụ» ị ga-abịa gafee a ilu na anya (dị ka a egwuregwu), dị ka "Blue ihuenyo" ga-apụta ozugbo.
I kwesịghị ichegbu onwe gị banyere ọnọdụ a, ebe ọ bụ na mgbaàmà a bụ naanị ngosipụta nke mgbanwe anyị mere na ndekọ Windows. Ọ bụrụ na ịmalite sistemụ arụmọrụ nke ọma, ị ga - ahụ na "acha anụnụ anụnụ" apụtaghị ọzọ. Iji gbanwee mgbanwe ị dị nnọọ nwere na-eso nzọụkwụ anyị tụrụ aro n'elu na-agbake mbụ aha.
2. Kwado / Gbanyụọ Safemode
Ọ bụrụ n'ị bụ otu n'ime ndị ahụ na - atụ ụjọ ijikwa "Windows Registry", anyị na - akwado iji ngwa ọrụ na - adọrọ mmasị nwere aha "Kwado / Gbanyụọ Safemode".
Ọ nwere a minimalist interface (dị ka ị pụrụ ịhụ na aga na nseta ihuenyo), ebe naanị gị nwere Họrọ otu ma ọ bụ bọtịnụ ndị ọzọ dabere na ihe ịchọrọ ime. Nke a pụtara na iji gbanye ma ọ bụ gbanyụọ "Ọnọdụ Nchekwa Windows" ị ga-pịa bọtịnụ dị iche iche. I nwekwara ike iji okwuntughe, nke a bụ nhọrọ dị oke mkpa iji n'ihi na site na nke a, ọ nweghị onye ga-enwe ike ịme "Ọnọdụ Nchekwa Windows" ma ọ bụrụ na ha amaghị paswọọdụ ị haziri na ngwa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Esi gbanyụọ njirimara Nchekwa na Windows
"Obere" na "Network"; Kwesighi ihichapụ ha mana anyị na-akwado ka ị gbanwee aha ha ka e wee mebie aghụghọ ahụ n'oge ahụ. Aha ndị ị nwere ike iji bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ma ọ bụrụhaala na ị na-echeta ha. Ezi echiche ga-abụ itinye leta "x" na njedebe nke aha ndị a ọ bụla. ????? Anaghị m ekwe ka onwe m gbanwee ma aha ahụ anaghị enyere m aka biko!
Naanị ịmalitegharịa kọmpụta ... m na enweghị m ike ịnyegharị aha
ihe omume dị egwu dijo
Enweghị m ike ịpụ na ọnọdụ nchekwa na-enwe olileanya ịchọta azịza dị mma maka kọmputa m maka ekele maka ozi ahụ niile
Zaghachi na arnulfo gallegos quiroz
Ihe anyị tụrụ anya na WWDC 2015
Ogbe ogbe mmịpụta nke abịakọrọ faịlụ n'ime Windows